१५ वर्ष जेल हाल्ने साइबर कानून आउँदै, के गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा ? | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, चैत्र २०, २०७५ १५:१०:४५
२ माघ, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कठोर कारवाहीको माग भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । संघीय संसदमा पेश हुन लागेको नयाँ विधेयकले सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने र साइबर बुलिङ गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।